Indlu enendawo yokuphola eseluphahleni kunye nePuli yeSky Garden - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola eseluphahleni kunye nePuli yeSky Garden
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguChamp
Hlala kwindawo ephithizelayo ekude kumbindi wedolophu, indlu enendawo yokuphola enophahla olujikelezwe yigadi yetropiki. Ikude ngeemayile eziyi-1.5 ukusuka embindini wedolophu. Ngena kwipuli yakho yabucala, funda iincwadi zakho zeholide kwindawo ephezulu eluphahleni okanye egadini ezantsi. Isidlo sakusasa samahala siyafumaneka.
I-chiateau epholileyo njengegumbi lokulala elinye kunye nebhalkoni ejonge igadi yetropiki. Iflethi okanye indlu ekwicomplex enekhitshi lakho eneti kunye nezinto zokwenza ikofu. Ifriji encinci ne-microwave nayo xa uyidinga. Nangona kunjalo, ukuba kukho nantoni na oyifunayo, sikhangele nje. Siyakuvuyela ukunceda nanini na.
Ibekwe kwindawo engaphantsi kwe-1.5 yeekhilomitha ukusuka kumbindi wedolophu, kude nesiphithiphithi kunye nedolophu. Yonwabela imfihlo yakho kunye nokuzola kule gadi yetropiki ijikelezwe. Ngokungafaniyo nombindi wedolophu unokubona kwaye uzive ukuba bunjani ubomi basekuhlaleni. Ivenkile yokubhaka ilungile apho ukuba ufuna ishwamshwam emva kwemini.
Umbuki zindwendwe ngu- Champ
Siyazihlonipha izinto eziyimfihlo zabantu, kodwa sikwakuvuyela kakhulu ukuthetha nawe ngezinto ezinomtsalane zasekuhlaleni nendlela yokuya kwiindawo ezithandwayo ngabakhenkethi. Eyona nto indenza ndaluncedo ekulungiseleleni uhambo losuku oluya ePinnawala Elephant orphanage naseSigiriya naseDambulla rock tempile.
Nceda uthethe naye ngesidlo sakho sakusasa kunye nexesha ongathanda ukuba nalo.
Siyazihlonipha izinto eziyimfihlo zabantu, kodwa sikwakuvuyela kakhulu ukuthetha nawe ngezinto ezinomtsalane zasekuhlaleni nendlela yokuya kwiindawo ezithandwayo ngabakhenkethi. E…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ampitiya